Thabo Mbeki ၏မိန့်ခွန်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ယူနက်စကို - Afrikhepri Fondation တွင်
ယူနက်စကိုမှ 2003 အတွက် Thabo Mbeki အားဖြင့်မိန့်ခွန်း
Cဟင်နရီလူးဝစ်ဂိတ်စ်က“ အာဖရိက၊ တိုက်ကြီး၏အနုပညာ” တွင်ရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်းပင်ကာတို၏အနုပညာအပေါ်အာဖရိက၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဥရောပတိုက်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုခွဲခြားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ မှောင်မိုက်ဖုံး၏မျက်နှာဖုံးနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနှင့်အတူဗေဒဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပသည်မဖြစ်ချင်၊ မဖြစ်လိုသည့်မူလနေရာအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်၊ အနည်းဆုံးခေတ်ဆန်း၏အဆုံးနှင့် ဉာဏ်အလင်း၏ခေတ်။ ရာစုနှစ်များစွာကတည်းကအနောက်သည်အာဖရိကနှင့်အထူးသဖြင့်ဆာဟာရတောင်ပိုင်းဒေသများသည်စျေးပေါသောကုန်ကြမ်းနှင့်လုပ်အား၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ယူမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်အငြင်းပွားမှုကိုတိုးချဲ့မည့်အစားတိုက်ကြီးမှချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတင်ပို့မှုအဖြစ်သို့သေချာပေါက်ရောက်စေသည်။ အရင်းအနှီးများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည့်အခါ၎င်းသည်ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန်ပိုမိုကြီးမားသောကြွယ်ဝမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ပြုမှုကာလသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏အခြေခံအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာလုပ်အားအဖြစ်ကြီးမားသောအလုပ်သမားတင်ပို့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာဖရိကအတွက်၎င်းသည်လူ့အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပြီးအာဖရိကလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်း၏စည်းစိမ်ဥစ္စာများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ စင်စစ်အနောက်နိုင်ငံတို့၏ကြွယ်ဝမှုသည်အာဖရိက၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ကိုလိုနီစနစ်သည်သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြမ်းများကိုအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သူ့ဟာသူကြွယ်ဝချမ်းသာလာစေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ဒါဟာနောက်ထပ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအားနည်းအတွက်မြို့ကြီးများ၏စီးပွားရေးဤမျှရိုးရှင်း extension များဖြစ်လာခဲ့ပြီးသော၎င်းတို့၏စီးပွားရေး, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အာဖရိကနိုင်ငံများ၏စွမ်းရည်ရလဒ်။ အာဖရိကကိုလိုနီများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစွမ်းရည်များကိုဖျက်ဆီးငွေကောက်ပဲသီးနှံ မှလွဲ. ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှု၏ကျဆင်းမှု၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်များစွာကိုအာဖရိကနိုင်ငံများတွင်စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုကနေဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်အစားအစာ၏အသားတင်တင်သွင်းဖြစ်လာကြပါပြီ။ အဆိုပါ Post-ကိုလိုနီခေတ်အခြေခံကျကျအခွအေနပြောင်းလဲသွားတယ်မထားပါဘူး။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ချမ်းသာကြွယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအရင်းအမြစ်များ၏လွှဲ, တစ်နည်းနည်းနဲ့, Post-ကိုလိုနီခေတ်ကာလ၌အရှိန်ပိုအရင်းအမြစ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြည်နယ်နှင့်အသစ်သောစက်ယန္တရားငွေကြေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအားပေးတော်မူပြီ လူအများ၏နှိပ်လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကို။ အများပြည်သူကဏ္ဍအခြေအနေများမြို့ပြန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ပြည်သူပိုင်ကဏ္ဍတွင်အလုပ်ရှာပေးဖို့အထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများစွန့်ခွာဖို့လူတိုက်တွန်းပါသည်။ ဤသည်ကိုသာကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက်အာဖရိက၏အရံများနှင့်လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းအခန်းကဏ္ဍကိုဆန်တဲ့တစ်သံသရာ၏အားကောင်းခဲ့သည်။ ပိုများသောအာဖရိကန်သူတို့ချုပ်ထားရာအတွက်မှိုကိုချိုးဖျက်ဖို့လျော့နည်းနိုင်ပါဖြစ်လာပြီးကုန်ကြမ်းနှင့်စျေးပေါသောလုပ်အား၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအမည်ရ, အာဖရိက၏အခြို့သောပုံရိပ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်:
တကယ်တော့, ရာစုနှစ်ကျော်, အာဖရိကတစ်ဘေးဖယ်တိုက်ကြီးအဖြစ်လိုအပ်မှုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သာနောက်ထပ်တိုက်ကြီးဘေးဖယ်ကြောင်းလုပ်ရပ်များစေပါတယ်။
ပိုများသောဘေးဖယ်ထားဒီယန္တရားအလုပ်လုပ်တယ်, က reverse ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ ဤပြဿနာကိုလည်းဒီယန္တရားနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့, တိုက်ကြီးသူ့ဟာသူ, ထုတ်လုပ်မှုမှသိသိသာသာအရင်းအမြစ်များကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အနာဂတျအတှကျအာဖရိကလူမျိုး၏မြော်လင့်ခြင်းတခြားသူတွေရဲ့သဘောထားကြီးမှုအပေါ်မှီခိုလုပ်ပါလိမ့်မည်အကြောင်း, ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအတွက်ထို့ကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်တာဝန်ယူ၎င်းတို့၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတစ်ဦးပုဂ္ဂလဒိဋ္လက်ခံမှုသူတို့ကိုယ်သူတို့သို့အာဖရိကန်လူမျိုး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာခိုးမရှိဘူးပြောင်းလဲအရာဖြစ်တယ်။ သူတို့လျော့နည်းခြင်းနှင့်သတိသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့မှီခို, ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ်ကနေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်လျော့နည်းနိုင်ပါဖြစ်လာကြပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလူ့အဖြစ်ဆိုးအဆုံးသတ်ကအာဖရိကကလူမဖြစ်ကြပြီးအကျိုးပြုအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ရပ်ကွက်မဖြစ်ရကြောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းလိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကိုနှင့်သရုပ်ဆောင်များကို၏တန်ဆာတိုးတက်စေရန် သူတို့ရဲ့လူနေမှုအခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ။ အာဖရိကကလူကိုယုံရမယ်, ထိုသို့ပြီးတော့အာဖရိကန်အဖြစ်, သူတို့ကလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏တိုးတက်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ကြပြီးသူတို့နေဆဲအောင်ထူးခြားတဲ့နှင့်အဖိုးတန်တဲ့ contribution ရှိသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်၏။
ဒီအနုတ်လက္ခဏာအတိတ်နေသော်လည်း, အာဖရိကနှင့်သူတို့တစ်တွေအပြုသဘောနှင့်အလားအလာအနာဂတ်ရှိအာမခံပေးရမည်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Starting Point သို့အာဖရိက၏ဘေးဖယ်ထားဖို့ဦးဆောင်သောအရာအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အာဖရိက၏မဟာဗျူဟာအခန်းကဏ္ဍကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ဖြစ်၏အဖြစ်တိုက်ကြီး, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အားလုံးအတှကျတစ်ခုမရှိမဖြစ်အရင်းအမြစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သယံဇာတအခြေစိုက်စခန်းသုံးခုအစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအတိုက်ကြီးအပေါ်နီးပါးနေရာတိုင်းတွေ့သမျှသောသတ္တုဓာတ်နှင့်အပင်များ၏ချမ်းသာကြွယ်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသူကားဤလောကအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သည့်နှင့်အတူတစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းဂေဟစနစ်အဆုတ်စိုးရိမ်မိုးသစ်တောတွေနဲ့ထုတ်လွှတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေ၏ကို virtual မရှိခြင်းဖြစ်ကြသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဂေဟဗေဒ၏အရေးပါသောအရေးပါမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်သောအခါအဤနောက်ဆုံးနှစ်ခုအချက်များ၏အရေးပါမှုကိုသာမကြာသေးမီကထင်ရှား။ , တတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းညျမွကွေီး၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏သက်သေသာဓက, အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လူ့မျိုးစိတ်သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သဘာဝအလျောက်နေရင်းဒေသများနှင့်ကြီးမားသောလူနေထိုင်မှုမရှိနေရာများများ paleontological နှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနက်ဘ်ဆိုက်များစိုးရိမ် တိုက်ကြီးများ၏ဝိသေသ။ အာဖရိက၏သဘာဝစည်းစိမ်ကိုသာယခုအရှင်သိပ္ပံနှင့်ကပြတိုက်နှင့်ပြတိုက်မှူးကြားတွင်ထုတ်ပေးအကျိုးစီးပွား၏ကျဉ်းမြောင်းသောလယ်ပြင်၌စွန့်ခွာ, ကိုယ်နှိုက်များအတွက်တန်ဖိုးတန်ဖိုးထားမှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့အာဖရိကန်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လူ့ subspecies, ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျော်ပြည့်စုံကြောင်းရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်ငွေကောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အာဖရိကန်များအတွက်အခြားစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြောင်းအပြစ်တင်သို့မဟုတ်တရားသူကြီးဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲ, သမိုင်းကြောင်း, အာဖရိကန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ကဒီအယူဝါဒအသွင်ပြောင်းလက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်သောအရေးပါသောစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရရပါမည်။
အာဖရိကန်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အပါအဝင်လူ့အဆင့်ဆင့်၏အောက်ပိုင်းလှာစေသည်သောတရားသေအယူဝါဒအဖြစ်သဘာဝကျကျယုတ်ညံ့သည်ဤဆက်ဆံဖို့အာဖရိကန်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုသာလွန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသူတို့အားအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ သာလွန်နည်းပညာ, ပိုကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လူမဆန်စွာယုံကြည်မှုများဥရောပတိုက်သားတို့သည်အာဖရိကန်အနိုင်ယူသူတို့ကိုကျေးကျွန်စေရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည့်အခါဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအာဖရိကန်၏ညံ့အကြောင်းကိုဥရောပတိုက်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ယုံကြည်ချက်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်အာဖရိကန်များ၏သရုပ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့သူတို့အာဖရိကန်အာဏာမှသဘာဝပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဥရောပပြသခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအကျရှုံးလတ်ဤအခြေအနေများအားလုံးအာဖရိကတော်လှန်ရေး, လူမည်းအဖြူရောင်အနိုင်ယူဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်းလင်းစွာကြောင်းကတိသစ္စာပြုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအစိုးရသောမင်းတို့အကြား, လူမည်းအင်အားစုကိုအသုံးပြုဖို့ပင်သောအခါပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်အကြား fixed နှင့်ရေစက်ကြားဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်, မာစတာနှင့်ကျွန်သည်အကြား, ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မရပါ။ ကြောင်းလူထုအုံကြွမှုပျက်ကွက် ထို့ကြောင့်အချိန်များအတွက်, ဇာတ်လမ်းမပြည့်စုံလျက်ရှိတဲ့အနာဂတ္တိအစွမ်းထက်အင်အားစုများကတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးကိုကျွန်ခံစေမတည်ရှိသည့်အခါဤပရောဖကျအထူးသဖြင့်သခင်ဖန်ဆင်းဒီအနာဂတ္တိမှားယွင်းသောခဲ့တဲ့ကွန်ကရစ်သက်သေအထောက်အထားများ, အထောက်အထား, ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုလျစ်လျူရှုကြဘူးနိုင်ကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအရာ, ကျွန်ပဲသူ့သခင်အဖြစ်လူ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ဒီအောင်မြင်ရန်, အာဖရိကန်ဥရောပကိုလိုနီဆန့်ကျင်ထအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီပုန်ကန်မှုများ၏ဆက်လက်အောင်မြင်မှု, မပုန်ကန်မှုကိုယ်နှိုက်က, ကဖြစ်သကဲ့သို့သူရဲကောင်း, လူဖြူထက်သာလွန်ဖြစ်ကြပြီးကြောင်းလိုအပ်သည့်သဘာဝကအမိန့်ရှိခဲ့သည်သောအယူသီးမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည် ယုတ်ညံ့လူမည်း။ သူတို့ကိုပေးထားသောနည်းလမ်းအဖြစ်ထက်အခြားတိုက်ကြီးများ၏အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့အဘို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပုန်ကန်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်ဖြစ်လာကြသူလွတ်လပ်သောနိုင်ငံများတွင်အုပ်ချုပ်ဖို့အာဖရိကန်များ၏စွမ်းရည်ကိုစွမ်းရည်အတွက်ရလဒ် အခြားသူများတိုက်ကြီးကိုလိုနီရန်။
အဆိုပါအာဖရိကန်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်ဤအရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအာဏာသည်ယခင်ကိုလိုနီတို့၏လက်များတွင်ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏လက်မှလွန်သောအခါသူတို့ကအာဖရိကထုများ၏အကျိုးစီးပွားအားဝတျပွုသကဲ့သို့မိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်အတိုင်း, တစ်ဦးလေးလံဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးသည်ဤ၏ပခုံးပေါ်မှာလှဲ ယခင်ကညှဉ်းဆဲ၏။ သူတို့ကနိုင်ငံခြားအင်အားကြီးသူတို့၏ "အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား" ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသစ်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်များအတွင်းရှိ၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကိုမြင်လျှင်ရသောအခြေအနေမျိုး၌ဤလုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် East-West ပဋိပက္ခကြောင့်စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏လက်တွေ့အားဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုရပ်ရွာထဲတွင်ယခင်ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံနှင့်အခြားကြီးစိုးကစားသမားထို့ကြောင့်အမှန်တကယ်လွတ်လပ်သောသရုပ်ဆောင်များကိုဖြစ်လာဖို့အဖြစ်အသစ်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်များအတွက်အကျိုးစီးပွားခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လာကြဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအသစ်လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုကျန်နေတဲ့သူတို့၏ "အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား" ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ် East-West ပဋိပက္ခ၏အခြေအနေတွင်မှား "အတွေးအခေါ်ရှင်အုပ်စု" ၌သူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မယ့်လမ်းအတွက်ပြုမူလို့မရပါဘူးထက်ချင်တယ်။ ဒါကကြီးစိုးအင်အားကြီးကြီးမားသောမှာမိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန်ယခင်ကိုလိုနီအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်လည်းမမှန်မကန်ဖို့အဆင်သင့်ရှိကြ၏ရသောအခြေအနေမျိုးခဲ့သည်။
ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံလည်းသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာသတိရှိရှိ, ဤအသစ်လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုများ၏မှီခိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ခိုင်းခဲ့သည်မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးအားနည်းခြင်းပေးထားသောဤအသစ်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်အများအပြားမှီခိုထက်အခြားဘာမှမဖြစ်ရန်အလွန်ကန့်သတ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကကြီးစိုးအင်အားကြီး၏အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံနှင့်ပင်အာဖရိကန်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်အမိန့်ဖြစ်ကြောင်းထွင်းရူပါရုံကိုဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်ပိုပြီးပိုပြီးမှီခိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးစိုးအင်အားကြီးဟောင်းအာဖရိကန်ကိုလိုနီများ၏လွတ်လပ်ရေးသည်ဤအသစ်လွတ်လပ်သောပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အာဖရိကအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့မတတျနိုငျကွဓိပ်ပာထားတဲ့အတွက်အခြေအနေဦးဆောင်သောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားရှာ အာဖရိက။ ထို့ကြောင့်မိမိတို့အဟောင်းများကိုစှဲဖို့အကူအညီပေးဖို့မြို့ပြနိုင်ငံများမှလိုအပ်သောဖြစ်လာပင်အာဖရိက-à-vis ၎င်းတို့၏ယခင်ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏မှီခိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။
အာဖရိကန်လူမျိုး, တိုင်းရင်းသားရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မရှိခြင်းဆက်လက်ဆငျးရဲဒုက်ခများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အထုဆငျးရဲဒုက်ခသူတို့ရဲ့သစ်ကိုအစိုးရသောမင်းတို့ပုန်ကန်မကြောင်းသေချာစေရန်ပြည်နယ်အစီအမံများ၏ဇွဲမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ချင်တော့, ဒီမတည်ငြိမ်မှုပုံအစုလိုက်အာဖရိကနိုင်ငံများတွင်အာဖရိကမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားသေချာစေရန်နှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံရေးသစ္စာသေချာစေရန်၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာအရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏အောင်မြင်မှုခြိမ်းခြောက်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအဘို့အဓိပ်ပာခဲ့သညျ။ ဒါဟာအာဖရိကနိုင်ငံရေးအလို့ငှာလိုအပ်အာဖရိကနှင့်ကမ္ဘာအဘို့နှစ်ခုလုံးကိုထိပ်တန်းအရေးပါမှု၏မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်၏မှတ်ပုံတင်နှင့်တစ်ဦးစနစ်ဦးဆောင် အောက်ပါအတိုင်းနိုင်သကဲ့သို့အုပ်ချုပ်မှု:
တရားဝင် Be နှင့်ထောက်ခံမှုများနှင့်သစ္စာရှိမှုအာဖရိကထုတို
အာဖရိကများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများသိသာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကကမ္ဘာနှင့်ကမ္ဘာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အာဖရိကအရင်းအမြစ်များကို၏အခြေခံအကြားရေရှည်တည်တံ့အပြန်အလှန်အုပ်ချုပ်ခွင့်, အာဖရိကအတွက်တည်ငြိမ်ပြီးညီညွတ်သောအခြေအနေများသေချာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်သူတို့ကကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်လည်းအရေးကြီးလှသည်။ ဒါဟာအဓိကထိုးနှက်ဖြစ်နှင့်ဤနှစ်ခုဖြစ်ရပ်၏ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပေးထား, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှောင်ခိုစျေးကွက်နှင့်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းဆန့်ကျင်အာရုံစူးစိုက်လို့ထို့အပြင်ဤကမ္ဘာတွင်အဘို့အရေးကြီးသည်။
ဒီလေးစားမှု၌၎င်း, ဆင်းရဲမွဲတေမှု, ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်းနှင့်ဘေးဖယ်ထား၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, အာဖရိကနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်း၏ကျန်၎င်း၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအတွက်အာဖရိကကောင်းစွာတတ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ် ကျွန်စနစ်, ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေးနှင့်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီ Neo-ကိုလိုနီခေတ်မှီခို၏။ ဒါဟာသာကြောင်းအာဖရိကနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလက်လှမ်းမမီဤအခြေအနေများအောက်တွင်အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျကျော်လွှားရန်သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်သည်။ အာဖရိက၏လက်ရှိအနေအထားအဘို့အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းပြချက်အဆုံးအဖြတ်ပြီးနောက်, အာဖရိကခေါင်းဆောင်များကဤရာစုအရုဏ်နှင့်ထောင်စုနှစ်သစ်မှာအာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏အဆိုပြုတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကတိပြုခဲ့သည်။ ကြောင့်လူအတို့အားပေး၏သောလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့တိုက်ကြီး၏ခေါင်းပေါ်မှာဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်အသရေရှိသည်သောအာဖရိကခေါင်းဆောင်များ, ဤရာစုအာဖရိကရာစုဖြစ်ဖို့ပဲဟုဆိုသည်။ ကျနော်တို့သမျှကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်အာဖရိကတစ်ဦးအဆင်သင့်နှင့်အလားအလာအနာဂတ်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်တတ်နိုင်သမျှလိုအပ်ပါကနှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်အထက်တစ် Self-ပြည့်စုံရာအနာဂတ္တိတောင်းသည်အတိုင်းဒီအာဖရိကပဏာမ၏အန္တိမရည်မှန်းချက်, တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံတကာစနစ်, နှင့်အာဖရိက၏ရူပါရုံ၏သဘောသဘာဝနှင့်ဗိသုကာပညာကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ရာစုနှစ်များစွာကနေတဆင့်အာဖရိကဝိညာဉျတျောကနေရရှိလာတဲ့အာဖရိကအနုပညာအတွက်အောင်မြင်မှုများ, ယဉ်ကျေးမှု, သဘာဝသိပ္ပံနှင့်ဒဿန-ဘာသာရေးကနေငါတို့အစွမ်းသတ္တိဆွဲပါ။ ငါတို့သည်ဤကိစ်စတှငျရာစုနှစ်သင်ယူမှုနှင့်သင်ကြားရေး၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ရပြီဖြစ်သော Mapungubwe နှင့်တောင်ပိုင်းအာဖရိကရှိဂရိတ်ဇင်ဘာဘွေ၏အဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်မြောက်အာဖရိကအတွက်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတက္ကသိုလ်များ, မှတ်မိချင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသမိုင်းနှင့်အာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအချို့မှတံခါးသော့ကိုကိုင်သောတိန်မ်ဘုတိုစာမူရှေးခေတ်စာရွက်စာတမ်းများသတိပေးတယ်။ ဤရွေ့ကားစာမူအရှင်သောသမားရိုးကျသမိုင်းဆိုင်ရာအမြင် belying, ထိုကဲ့သို့သောအလယ်ခေတ်အတွင်းနက္ခတ္တဗေဒ, သင်္ချာ, ဓာတုဗေဒ, ဆေးပညာနှင့်ရာသီဥတုဗေဒအဖြစ်ဘာသာရပ်များအတွက်ပညာရှင်များနှင့်အာဖရိကပညာရှင်များ၏အရည်အချင်းကိုမှသက်သေခံချက်ရေးထားလျက်ရှိ၏ အာဖရိကမျှသာတစ်ဦးပါးစပ်အစဉ်အလာရှိပါတယ်တဲ့တိုက်ကြီးဖြစ်သည်။
အာဖရိကခေါင်းဆောင်များသည်တိုက်ကြီးသာကုန်ကြမ်းတစ်ဦးပေးသွင်းအဖြစ်နေလျှင်, တာရှည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၏တိုက်ကြီးအုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစနစ်ကတုံ့ပြန်ရန်သူ့ဟာသူပြန်လည်နေရာချထားရန်လိုအပ်နေသည်ဟုရှင်းပါတယ် နှင့်စျေးပေါသောလုပ်အား။ အာဖရိကစည်းလုံးညီညွတ်ရေး (OAU) ၏အဖွဲ့ 1963 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်သောအခါသူ၏ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုလိုနီအာဏာရှင်ကနေတိုက်ကြီးလှတျမွောကျခဲ့သညျ။ 1994 အတွက်တောင်အာဖရိကအသားအရောင်ခွဲခြားရေး၏အဆုံးဒီသမိုင်းဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများပြီးစီးအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအောင်မြင်မှုတိုက်ကြီးရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသစ်ကိုစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အဖွဲ့အစည်းများ၏အားနည်းချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဒါဟာတိုက်ကြီး၏ကိုလိုနီခေတ်နှင့်လွတ်မြောက်ခြင်းပြီးနောက်ခဲ့တယ်, ပြည်တွင်းတိုက်ကြီးနှင့်နိုင်ငံတကာစိန်ခေါ်မှုများအားအသစ်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလုံးအဖြစ်အာဖရိက, ဒါပေမယ့်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများသာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် 2002 အတွက်အဘယ်သူ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဟာ OAU ၏ထံမှမတူသစ်ကိုအာဖရိကခေါင်းဆောင်များကဦးဆောင်သည့်တိုက်ကြီးတစ်သစ်ကိုတူရိယာသကဲ့သို့, အာဖရိကသမဂ္ဂ (AU) ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကသမဂ္ဂ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားဖြင့်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ဥပဒေများအောက်တွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pan-အာဖရိကပါလီမန်အာဖရိကသမဂ္ဂလျှောက်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုပေးသည်။
တရားမျှတရေး၏အာဖရိကန်တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအက်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ပြောင်ချိုးဖောက်မှုများအဘို့အဖုံးမဖွစျနိုငျသညျ။ ယခုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုများတားဆီးဘို့အသံအခြေခံရှိလိမ့်မည်။ ရပ်တန်၎င်း၏လက်ရှိပြည်နယ်ထဲကတိုက်ကြီးရုတ်သိမ်းပေးရန်အာဖရိကန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအာဖရိကများအတွက်လူမှုစီးပွားအစီအစဉ်, အာဖရိကရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (NEPAD) အတွက်နယူးမိတ်ဖက်အတွက်၎င်း၏အဆုံးစွန်စကားရပ်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ပစ္စည်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ခိုင်မြဲစွာအာဖရိကထားရန်လိုအပ်သောြဒပ်မပါသောအခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဆကျဆံ။ အာဖရိကခေါင်းဆောင်များဖိနှိပ်မှုအတွက်သန့်ရှင်းတဲ့တင်စားမှုများကိုအာဖရိကရဲ့ကြံနှင့်အတူခြိုးဖောကျနှင့်အရှင် Self-ပြည့်စုံရာအနာဂတ္တိအဆုံးသတ်ရေး, ငါတို့ယုတ်ညံ့ဖြစ်ကြောင်း, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် NEPAD လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ။ အေဂျင်စီများနှင့်နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေများထံမှလိုအပ်ချက်များ, အလှူငွေ, ယခင်ကရိုးသားစိတ်ရင်းမပါဘဲနှင့်လည်းအများအပြားမေးခွန်းများကိုမပါဘဲလက်ခံခဲ့သည်အကူအညီနှင့်အကူအညီများနှင့်ကျေးဇူးတင်စရာလိုအပ်သောရိုသေခြင်း, နေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလမ်းပေးခဲ့တယ် ထိုလူမြိုးရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့အလားအလာသက်ရောက်မှုများအတွက်ဖော်ထုတ်ဒေသများရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အာဖရိကရဲ့ရှားပါးအရင်းအမြစ်များကို။ အာဖရိကယခုယင်း၏အယှက်သတ်မှတ်နှင့်သူ၏ဖြစ်ကြောင်းမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူအဖြေရှာရန်တာဝန်ရှိပါတယ်။
NEPAD နှင့်တိုက်ကြီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြီးထွားလာအရှိန်အဟုန်၏ကြီးထွားလာအောင်မြင်မှုအခြားအမှုအရာတို့တွင်အအာဖရိကတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ပါဝင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်သင့်ပါတယ်။ "တဦးတည်းကောင်းသောထုံးစံကမ္ဘာကြီးကိုယိုယွင်းလိမ့်မယ်မည်ကို စိုးရိမ်. , အဟောင်းအမိန့်အပြောင်းအလဲအသစ်များကိုဖို့လမ်းပေးခြင်းကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းများစွာအတွက်ကိုယ်တော်တိုင်ပြည့်": ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်သောသူသည်သခင်ဘုရား၏အဲဖရက် Tennyson ကိုသတိရ
ယူနက်စကိုမှနိုဝင်ဘာလ 19 2003 အပေါ် Thabo Mbeki မိန့်ခွန်း
စက်တင်ဘာလ 18, 2020 5:14 pm တွင်၏အဖြစ်
သိပ္ပံနှင့်ဘဝ - ကျန်းမာရေးကိုနားလည်ခြင်း (Youtube Channel)
စဉ်းစားပြီးချမ်းသာလာခြင်း - နပိုလီယံဟေးလ် (PDF)